"Maty" amin'ny alàlan'ny tariby USB Type-C | Androidsis
Ny tariby USB Type-C dia manendasa Chromebook Pixel an'ny Google Engineer
Andro vitsy lasa izay dia miresaka momba ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny seranan-tsambo USB Type-C izay mamela anao hanana fahatsiarovana USB ianao, toa an'i Sony, izay mifandray amin'ny solosaina na fitaovana finday manana an'io karazana fifandraisana vaovao hitantsika ao amin'ny fitaovana Google na OnePlus 2 io mihitsy. Ny fahaizana sy fanamorana omena azy dia mahatonga azy ireo maro ny mpanamboatra no mampiditra an'io karazana fifandraisana io ao amin'ny fantsom-baovaony vaovao, zavatra iray izay hitranga ao amin'ny Galaxy S7 vaovao fantatsika, amin'ny tsaho samy hafa, fa hanolotra fanohanana ny USB Type-C izy. Na dia angamba aza, amin'ny vaovao anio, dia afaka nitahiry fitarainana betsaka izy ireo raha toa ka nitranga ilay zavatra nanjo ny injeniera Google iray.
Ilay injeniera Google Benson Leung no miandraikitra ny fitsapana ireo tariby rehetra Izy ireo dia azo vidiana amin'ny magazay an-tserasera toa an'i Amazon, mba hahafantaran'ny mpampiasa ny tsara sy ny lesoka na mety hiteraka olana lehibe amin'ny fitaovany. Nandeha tsara ireo fitsapana ireo mandra-pahitanao tariby tsy dia tsara noforonina izay nanapaka tanteraka ny solosainao finday Chromebook Pixel. Tsy ny tariby USB Type-C rehetra no foronina mitovy. Na dia misy aza ny mandoa vola tsara kokoa noho ny sasany, ny mihoatra ny antsipirian'ny tariby USB amin'ity karazana ity dia mety hanimba ny fitaovan'ny fitaovanao, na dia "fahafatesany" eo noho eo aza.
1 Olana amin'ny USB Type-C
2 Ny Chromebook Pixel anao dia simba tanteraka
Olana amin'ny USB Type-C
Tamin'ny Novambra tamin'ny taon-dasa Tsy maintsy namaly ireo fiampangana i OnePlus avy amin'i Google momba ny tariby USB Type-C misy azy. Io injeniera io ihany, Benson Leung, no namoaka lisitra nanorenany izay tariby USB Type-C izay azo antoka ampiasaina. Leung izy tenany ihany no nisedra ireo tariby mba hanatsoahan-kevitra fa ny ankamaroany dia tsy mety amin'ny fitaovana.
Ilay mpanamboatra OnePlus dia iray amin'ireo naratra tamin'ity tatitra ity, satria manome tariby USB an'ity karazana ity sy ireo adaptatera ao amin'ny OnePlus 2. Ny mahatsikaiky dia ny nanambarany fa, na dia azo antoka tsara aza ny tariby hampiakatra ny sainam-pireneny, aza manaraka ny fitsipika mifehy ny tariby USB Type-C amin'ny feno. Midika izany fa mety hiteraka olana ny fampiasana ny tariby misy ny fitaovana ampiasain'ny antoko fahatelo.
Izao dia manana isika olana hafa mifandraika amin'izany miaraka amin'ity karazana tariby ity, satria tsy ny rehetra no mandalo mividy iray miaraka amin'ny fitsipika mahazatra izay miantoka ny fampiasana azy, ary afaka manapa-kevitra ny hitahiry vola euro vitsivitsy izy ireo hahazoana tariby izay mety hiteraka olana lehibe amin'ny fitaovany.
Ny Chromebook Pixel anao dia simba tanteraka
Ka raha tsara vintana ianao, ny tariby Type-C dia ho diso, fa i Benson Leung dia tsy nanana firy tamin'ny tariby Surjtech, izay amidy 10 $ amin'ny Amazon. Leung dia nampiasa Pixebook Chromebook sy Sniffer USB PD hanamarinana ny toetran'ny tariby, saingy vaky teo no ho eo ilay snaty tamin'ny fotoana nampifandraisanao ny tariby. Ary tsy teto ihany ny zava-drehetra, fa ny mpanera USB laptop kosa nodimandry ihany koa, satria sady tsy manome vola no tsy mamindra data.
Ny antony nahatonga ny tariby nahatonga fahasimbana betsaka dia satria tariby ratsy io, izay "namono" teo noho eo ny solosainy. Leung dia nanome kintana tamin'ilay tariby ary nanoro hevitra tamin'ny Amazon izy mba tsy hisy hividy azy. Leung, avy any ny Google+ anao, dia nilaza fa hifandray mivantana amin'ny mpanamboatra izy ary amin'izao fotoana izao dia tsy ho afaka hamakafaka tariby bebe kokoa amin'ity karazana ity raha tsy manana fitaovana vaovao hanohizana ny fitsapana azy.
Ny lisitry ny tariby izay nankatoavin'ity injeniera Google ity dia azo jerena avy ao Ity rohy ity. Ary raha manana fitaovana finday toy izany ianao OnePlus 2 na iray amin'ireo Nexus vaovao, zahao tsara izany lisitra izany alohan'ny hidirana amin'ny fividianana, satria mety ho lany ny telefaonanao vaovao amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny tariby amin'ny toe-javatra ratsy na tonga avy amin'ny orinasa amin'ny fomba toy izao mba hahafahanao mitondra solosaina finday iray mitentina 1500 dolara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny tariby USB Type-C dia manendasa Chromebook Pixel an'ny Google Engineer
Ny famaritana Alcatel OneTouch Idol 4 sy 4S dia mivoaka
Microsoft mividy keyboard Swiftkey malaza $ 250 tapitrisa